नियाग्रा में नई ऊंचाइयों के साथ रोमांस – पहुरा समाचार
वर्ष को यो गीत को लेखक अन्तिम पद सम्म मलाई थियो, तर पटक म अनुमान 1841 मा विभिन्न थिए, त्यसैले जो म एक हिट के हो भन्न छु। तथ्यलाई भए तापनि नियाग्रा परिदृश्य वर्षौंदेखि परिवर्तन भएको छ कति, यो रोमान्स को लागि उत्तम ठाउँ बाँकी छ कि, हुनत छ। तर यो कसरी प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुभयो? का एक संक्षिप्त यात्रा फिर्ता लिन गरौं। तपाईं थाह छ, honeymoons आफ्नो हाल nuptials मनाउन नवविवाहितहरूका लगियो परम्परागत बिदा हुन्छन्। तिनीहरूले पहिलो 19 औं सताब्दी ब्रिटेन लोकप्रिय भयो। त्यतिबेला मात्र माथिल्लो वर्ग साँच्चै यात्रा गर्न उठयो सक्छ, र नयाँ जोडे अक्सर तिनीहरूले परिवार र विवाह गर्न यो गर्न सक्षम थिए मित्र भ्रमण हुनेछ, जो समयमा विस्तारित “दुल्हन पर्यटन” लिन थियो। यो परम्परा अन्ततः युरोप भर फैलाउन र वर्गहरू बीच खाली बन्द बित्तिकै, अझ व्यापक प्रसार कुरा मा विकसित। जोडे honeymoons मा जा को अभ्यास ठूलो पर्यटन को पहिलो उदाहरणहरू एक थिए।
ठ्याक्कै यो भनिन्छ किन “सुहागरात” त्यहाँ सिद्धान्त को एक जोडी हो यद्यपि, कुनै वास्तविक विवरण अवस्थित छ, अज्ञात छ। सबैभन्दा लोकप्रिय र जस्तो देखिने सबैभन्दा संभावना छ, यसलाई विवाहको पहिलो महिना साधारण को happiest र sweetest छ कि infer गर्न चाहनुभएको छ किनभने “सुहागरात” प्रयोग गरिन्छ भनेर भन्छन्। जब त्यहाँ यस्ता कुनै कुरा थिए “महिना” समय चन्द्र को चरणहरु मापन गरिएको थियो। केही देशहरूमा, यो पनि गर्न अनुवाद गरिएको छ “honeymonth।” अर्को सिद्धान्त शब्द यो मान्छे विवाहको पहिलो महिना समयमा विवाहित जोडीहरू निःशुल्क मीड (honeyed रक्सी) दिन को लागि लोकप्रिय अभ्यास हुन प्रयोग गर्ने विचार देखि व्युत्पन्न बताए । जो साँचो मूल, सुहागरात एक भन्दा बढी महिना एक हप्ता देखि कहीं पछिल्लो गर्न सक्छन् अक्सर महान् पर्यटन मा विकसित भएको छ। फल्स पहिलो धेरै प्रसिद्ध अनुहारहरू त्यहाँ सुहागरात निर्णय पछि “संसारको हनीमून पूंजी” को रूपमा यसको प्रतिष्ठा कमाए। हारून Burr, संयुक्त राज्य अमेरिका को 3rd उपाध्यक्ष, जेरोम Bonaparte, नेपोलियन दाइ नयाँ अर्लिन्स देखि stagecoach यात्रा गरेका क्रममा सुहागरात भने छ 1801. मा फल्स उनको सुहागरात खर्च 1804 मा गर्ने छोरी, Theodosia, थियो फल्स मा। र मान्छे धनी र प्रसिद्ध गरिरहेका छन् के गर्न चाहनुहुन्छ किनभने, धेरै अरूलाई चाँडै यी दुई जोडे को नेतृत्व पछि लागे।
वास्तविक वाक्यांश “विश्व को हनीमून पूंजी” प्रारम्भिक 1900s सम्म देखिने सुरु भएन, र यो अक्सर प्रचार पोस्टर र पुस्तिका धारण थियो। को इरी नहर खोल्ने र रेल को निर्माण संग, फल्स अचानक मानिसहरूलाई धेरै अधिक सुलभ भयो। 20 औं शताब्दीमा ओटोमोबाइल को आविष्कार संग, फल्स यात्रा को विकल्प पनि अधिक मान्छे खुला थियो। जोडे मात्र किनभने mesmerizing झरना को फल्स नियाग्रा आकर्षित थिए, तर पनि धेरै राम्रो र एकांत पार्क र धेरै रोमान्टिक क्षणमा लागि प्रदान बाटाहरू। आजकल, फल्स शहर बारेमा 50,000 honeymooning जोडीहरू वर्ष पाहुना खेल्छ; र फल्स पर्यटन पनि बाहिर मेयर द्वारा हस्ताक्षर सुहागरात प्रमाणपत्रहरू दिन्छ। शहर मिति यी प्रमाणपत्रहरू लगभग एक लाख बाहिर दिनुभएको छ। त्यसैले गर्दा धेरै जोडे आजकल आफ्नो honeymoons मा संसारभरि टाढा-flung ठाउँहरू जान छनौट गर्दै छन्, त्यहाँ अझै पनि भनी थुप्रै संसारको पहिलो सुहागरात राजधानी, फल्स भ्रमण गर्न चित्रकला राख्छ सामना कुरा। र तिनीहरू यहाँ हुँदा, तिनीहरूले सम्पूर्ण नियाग्रा क्षेत्र, केवल फल्स, अझै पनि रोमान्टिक मुड सेट गर्न ठूलो ठाउँहरू धेरै दावा कि पाउनुहुनेछ। विश्व-वर्ग स्पा, अन्य शहर डाही बनाउन एक भोजन दृश्य, बाहिर फैंसी रात, strolling लागि आरामदायक सहर … तपाईं यो नाम हामी यहाँ छ। नियाग्रा मा रोमान्स हाम्रो सिंहावलोकन लागि पढ्न!
← भारत आज माइक्रोमैक्स5का एक डबल सेट की शुरुआत है; कैसे लाइव स्ट्रीम को देखो
बांग्लादेश व्यापार मेले दूसरे से गुरुवार को शुरू करता →
July 4, 2017 yccadmin Comments Off on चाय पीने में मदद मिल सकती संज्ञानात्मक गिरावट टालना